စျေးနှုန်းနိမ့်သောဖြတ်စက်ကိုမိုက်ခရိုအစိမ်းရောင်အခွံဖြတ်ရန်အသုံးပြုသောစက်ဖြစ်သည်, သွေ့ခြောက်သောပြောင်းဖူးရိုးတံ, ဆန်ကောက်ရိုးနှင့်အခြား forage သီးနှံများ,ကောက်ရိုးနှင့်ဆေးရွက်ကြီး, ဂျုံကောက်ရိုး, ပြောင်းဖူးကောက်ရိုး, တံမြက်စည်း corm ကောက်ရိုး, ချိုသောအာလူးပင်စည်, ချစ်သူ, စပါးကိုဂျုံကောက်ရိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောဇီဝလောင်စာပစ္စည်း.
ဤကြိတ်ခွဲထားသောပစ္စည်းများကိုတိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းအတွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, သမင်,မြင်းစသည်တို့. ၎င်းကိုစပါးကြိတ်ခြင်းအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်,ပြောင်းဖူး,ဂျုံ,စသည်တို့.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကျေးရွာများနှင့်မြို့ကြီးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်လည်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်, ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်, အချို့မှတဆင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကောက်ရိုး ချတ်ဖြတ်စက် ခုတ်ပြီးတော့ခုတ်, ထို့နောက်နွားနှင့်သိုးကျွေးသည်, တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့သောတိရစ္ဆာန်များကိုကျွေးမွေးပါ, အများအပြားကောက်ရိုး ensilage စက်ကိုအချိန်မီကိုင်တွယ်, ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေသောလောင်ကျွမ်းခြင်းမှကောက်ရိုးများကိုကာကွယ်ရန်, နှင့်ကြီးမားသောgroundရိယာမြေပြင်သည်, မြေဆီလွှာအော်ဂဲနစ်အကြောင်းအရာများ၏ content ထည့်ပါ, မြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းပုံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, မြေဆီသြဇာ, သီးနှံသစ်ကိုနည်းလမ်းသစ်ဖြင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း, ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်.
ချတ်ဖြတ်စက် အဓိကအားဖြင့်အစာကျွေးခြင်းကိရိယာ၏ရေးစပ်သည်, ထုတ်လွှင့်စက်, feed device, ရှုး, ကြိတ်ခွဲစက်, စစ်ထုတ်ကိရိယာ, ပစ်ပစ္စည်း, လမ်းလျှောက်ကိရိယာ, အကာအကွယ်ပစ္စည်း, ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲကိရိယာနှင့်. Straw Cutter သည်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိသောလတ်ဆတ်သော Cutter ကိုပိုင်ဆိုင်သည်, ခြောက်သွေ့သောကောက်ရိုးရှုး, Qing သိုလှောင်မြက်ပင် Cutter, ပြောင်းဖူးကောက်ရိုး Cutter နှင့်အခြားကောက်ရိုး Cutter ပစ္စည်းကိရိယာများဖြတ်, လယ်သမားများအတွက်ကျွမ်းကျင်သောသုတေသနတစ်ခုဖြစ်သည်, ကောက်ရိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြfarmersနာကိုလယ်သမားများအနေဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်.